Credit Officer | Vision Fund Myanmar Co.,Ltd ﻿
13.7.2019, Full time , Financial Services
Company: Vision Fund Myanmar Co.,Ltd
Will you use your leadership skills and microfinance experience to impact children’s lives and empower communities? VisionFund Myanmar is seekingadynamic, hands-on leader who has experience of growing organizations in complex environments.We provide financial access on behalf of World Vision,aglobal relief, development and advocacy organization. Through small loans and other financial services, we aim to empower families to create incomes and jobs, which unlock the potential for communities to thrive and children to grow up havingabrighter future.
•	ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှု အဆင့်များကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။
•	ရပ်ရွာလူထု၊ အများပြည်သူနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမည်။
•	ဈေးကွက်သုတေသနနှင့် စမ်းစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်ရမည်
•	အလားအလာရှိသောဆုံးရှုံးမှုများ နည်းပါးအောင်စီမံဆောင်ရွက်ရမည်။
Credit Officer (ကော့ကရိတ်၊ မိုးညှင်း၊ မိုးကောင်း၊ နောင်ချို )
•	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။
•	အဖွဲ့အတွင်း တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
•	တစ်ပါးသူအား ကူညီလိုစိတ်ရှိရမည်။
Work location No.95(A), 7th Floor, Kyaik Wine Pagoda Road, 8 Mile Business Center, 8 Mile, Yangon
Company Industry: Credit Officer
Job posted: 13/7/2019
•	Develops annual auditing plan •	Supervise and reviews the activities of Internal Audit Department •	Submit timely report to Regional Audit Manager and Management team •	Assist in Fraud investigations and external audits
•	ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှု အဆင့်များကို စီမံခန့်ခွဲရမည်။ •	ရပ်ရွာလူထု၊ အများပြည်သူနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုရမည်။ •	ဈေးကွက်သုတေသနနှင့် စမ်းစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှု ဆောင်ရွက်ရမ� ...
•	ချေးငွေထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်မှု အဆင့်များကို စီမံခန့်ခွဲ ရမည်။ •	ရပ်ရွာလူထု၊ အများပြည်သူနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆို ရမည်။ •	ဈေးကွက်သုတေသနနှင့် စမ်းစစ်လေ့လာခြင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ ဆောင်ရ� ...
•	ငွေသွင်း၊ ငွေထုတ်ပြုလုပ်ခြင်း •	ငွေကြေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးနှင့် အစီရင်ခံစာတင်ခြင်း •	အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်းတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း •	ဗွီးရှင်းဖန်း(ဒ်)၏ စံတန်ဖိုးများကို လိုက်နာစောင့်ထိန် ...
•	ချေးငွေ အချက်အလက်များ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း ရှိရမည်။ •	အစီရင်ခံစာများ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်ပံ့ပိုးပေးခြင်း ရှိရမည်။ •	ချေးငွေ စာရွက်စာတမ်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း ရှိရမည်။ •	သတင်းအချက်အ� ...
•	စာရင်းဇယားလုပ်ငန်းများနှင့်ငွေကြေးအစီရင်ခံစာတင်ပြရမည်။ •	ချေးငွေနှင့်ငွေချေးသူများ၏ အချက်အလက်များကိုထည့်သွင်း ထိန်းသိမ်းရမည်။ •	ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်လေ့လာရမည်။ •	ဗွီးရှင်း� ...
•	Develop and strengthen VFM brand reputation in communities •	To build productive relationship with partners ,local authorities community leaders •	Conduct research to assess and understand the different market players •	Coordinate with other market players and operations staff •	Monitor client businesses and develop risk profiles •	Collect client stories on regular basis and other requested information •	Set-up ,organize ,implement and update staff warden system •	Facilitate in gathering updating consolidating and analy ...
Job ads in Business Management Jobs and in Rakhine State
Credit Officer Accountancy Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Vision Fund Myanmar Accountancy Jobs Accountancy Jobs Credit Officer Jobs in Myanmar, jobs in Yangon